Hangouts adabaghịzi na Wear OS | Androidsis
Kemgbe 2018, ọtụtụ bụ akụkọ metụtara izi ozi na ikpo okwu ọkpụkpọ vidiyo nke Google Hangouts, ngwa nke ghọrọ otu n'ime ndị a kacha eji mgbe ị na-eme ụdị nkwukọrịta ọ bụla maka ekele ọ na-enye anyị. Na nwute, Google achọghị ịma nke ahụ mara ọkwa na ọ machibidoro iji ọrụ ahụ maka ụlọ ọrụ.
Ọhụrụ ije na-akwado mkpebi a, anyị na-ahụ ya na ọchụchọ ahụ ibu nwere wepụrụ ohere nke ịwụnye ya na ngwaọrụ ndị Wear OS jisiri, sistemụ arụmọrụ anyị nwere ike ịchọta na smartwatches. Ọ bụrụ na ibidobeghị ịchọ ihe ọzọ na nke Hangouts na-enye, ị na-ewerela oge tupu oge agafeela.
Google ga ekewa Hangouts n'ime ngwa ahia abuo: Hangouts Chat na Hangouts Meet. Ebumnuche Hangout ka ọ bụrụ ihe ọzọ na Slack na Microsoft Otu, abụọ n'ime ọrụ izi ozi a na-agbasakarị na gburugburu ebe azụmahịa. Hangouts na-ezute, ka ọ dị ugbu a, ga-abụ ikpo okwu Google maka mkparịta ụka vidiyo ebe ọ gaghị adị mkpa ịbanye iji nweta.
Maka ugbu a anyị amaghị ma ọ bụrụ na onye ibu ọchụchọ na-ezube ịmalite ngwa maka ekwentị mkpanaaka nke ọrụ ọhụrụ ọhụụ, ihe n'eziokwu adịghị mkpa nye ndị ọrụ ebe ọ bụ na ha agaghị enwe ike ịnweta ọrụ ndị a belụsọ na anyị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ejirila G Suite Enterprise.
N'oge a ọ bụrụ na anyị gbalịa ịwụnye ngwa ahụ site na ngwaọrụ wearable site na ụlọ ahịa ma ọ bụ site na Storelọ Ahịa Play nke akụrụngwa anyị, anyị nwere ike ịhụ otu ụdị smartwatch anyị nwere ọ pụtaghị na ngwaọrụ ndị dakọtara ebe anyị nwere ike iwunye ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a mma ọzọ ka mma otu video oku, ngwọta kachasị mma dị ugbu a bụ nke Skype nke Microsoft nyere, Ọ gwụla ma ogo vidiyo dị gị ezigbo mkpa, ebe ọ bụ na ọ bụrụ na ọ dị, ọrụ WhatsApp na-enye anyị zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Anaghị akwado Hangouts na Wear OS